Dokotera SIMAO Leonardo – MyDago.com aime Madagascar
Mihevitra ny tenany ho mpitondra ?
Tonga soa aman-tsara eto an-tanànan’ny Gasy ny Dokotera Simao, ka solotenan’ny Sadc ve izy iny ? Sa iraky ny inona ? Isika Gasy mihitsy ve no te-hametraka an’Ingahy iny ho « mpanadamina » sy tompon’ny « hevitra » rehetra ? Tsy mazava intsony ny raharaha.
Rehefa handeha sy niala teto izy dia nasainy natsangana tamin’ny alalan’ilay taratasy norangotina teny Ivato ny Governemanta. Rehefa injay ka tonga izy dia nanitrikitrika fa tsy azo ovàna intsony ny governemanta efa nijoro, ary efa tara loatra raha izao vao hisy mihevitra ny hanao minisitra.
Tompon’ny teny farany ?
Efa nieràna tamin’ireo tao anivon’ny SADC ny fanendrena ny Praiminisitra Vital, hoy filohan’ny fahefana avo Rajoelina tamin’ny fanendrena ity Praiminisitra ity tamin’ny 26 martsa 2011 lasa teo. Na ireo rehetra nanao ny rangopohy teny Ivato aza dia samy misalasala ny amin’ny fampiharana araka ny tokony ho izy an’iny taratasy iny, fa ny Dr SIMAO dia mahatsapa fa mifanaraka tsara amin’izay voasoratra iny, ary tsy azo soloina, na koa ovàna ? Inana tokoa anefa ny ezaka efa vitan’ity governemata ity nandritra izay 3 volana nitsanganany ? Efa nahavita nanangana ny fitoniana ara-politika ? Efa nanao dingana ho amin’ny firosoana ho amin’ny fifidianana? Efa voatsangana ny CES sy ny fanitarana ny CST, na ny CT ? Efa mba nandray ho zava-dehibe izay hevitra nivoaka tany Gaborone, na ny tany Sandton ?
Fifidianana sy filaminana
Tadiavina sy karohina mafy ny fitoniana, satria izay no ahafahana miroso amin’ny fifidianana. Nambaran’ity Dokotera Mozambikana ity koa fa mialoha ny fifidianana ny fitoniana sy ny fiverenan’ny filoha taloha Ravalomanana. Dia tonga indrindra mialoha ny fetim-pirenen’ny Gasy ny Dr Simao, ary ho hitany ve ny fisaratsaran-kevitra sy ny fomba fankalazana izany ? Dia andrasana amin’ity vahiny ity indray izany ny fanondroana ny datim-pifidianana sy ny filazana fa milamina amin’izay eto ?
Auteur Ony RambeloPublié le 23 juin 2011 Catégories Malagasy, Politique
1 pensée sur “Dokotera SIMAO Leonardo”
24 juin 2011 à 15 h 06 min
Mahavariana ny fihetsik’ity simao ity> Tena mediateur ve sa…? Nahoana no tsy azo ovaina ny gvt sa ve consensuel, inclusif et neutre ato camille vital sa za no tsy maharaka?
Précédent Article précédent : Mektoub : aleo maty toy izay hilelaka ny FAT.